Onye na -emepụta ihe na onye na -ebubata mmiri mmiri nke China AKWỤKWỌ
Enwere ike ịhazi mgbanaka mmịfe mmiri n'ọtụtụ nha, ike na ọnụọgụ nke ụzọ, ntinye ọkụ eletrik na -akwụsị akwụsị site na mgbama ruo 10,000V yana ọkwa dị ugbu a ruo 500Amps. A na -eji brushes eriri ọla edo maka sekit mgbama yana brushes graphite ọlaọcha na mgbanaka ọla edo dị oke ọnụ ahịa maka sekit dị ugbu a. Enwere ike ijikọ mgbanaka mmịfe eletriki a na njikọta rotary fiber optic na nkwonkwo rotary nke mmiri iji nye usoro ngagharị ntụgharị zuru oke maka ngwa elu ma ọ bụ nke dị n'okpuru. Emebere mgbanaka mmịfe mmiri AOOD ka ọ rụọ ọrụ na oke mmiri.
Nlereanya Ugbu a Voltaji Nha (OD) Ọsọ ọrụ
R180 Max 7A kwa mgbanaka
Max 100A ngụkọta dị ugbu a Max 1000VAC Ogologo: 72.4 mm Max 100rpm
R176 Max 20A kwa mgbanaka
Max 720A ngụkọta dị ugbu a Oke kachasị 7200VAC 140mm Oke ọsọ nke 50 rpm
Nke gara aga: Eriri Optic ngwakọ ileghara Mgbaaka
Osote: Site na Bore Slip Rings
Mgbanaka mgbanaka mmiri